Nke a bụ freemium nlereanya nke EVE Echoes: ọ ga-abata n'August | Gam akporosis
EVE Echoes anyị nwere ohere ịnwale ya ọnwa ole na ole gara aga na nke bu eziokwu bu na anyi nwere obi uto. Awa ole na ole gara aga ụmụ okorobịa na-akwado mmepe ya ekwuola na ọ ga-abata n’etiti ọnwa Ọgọst. Nwere ike ịdebanye aha maka nlele na Google Play.
Ọ bụrụ na egwuregwu ọhụrụ a maka gam akporo pụrụ iche, ọ bụ n'ihi na ọ nwere onye bu ya ụzọ buru ibu nnukwu EvE Online nakwa na ọ bụ ohere kacha mma mmo dịbeghị mbụ. Ugbu a, anyị ga-enweta ya enwere ike site na mkpanaka anyị iji nyochaa usoro igwe anyanwụ dị puku asatọ ha mbara ala ha, satịlaịtị, eriri oche ha na ndị ọzọ. Egwuregwu nke ga-enye anyị awa na awa nke egwuregwu maka afọ ole na ole sochirinụ. Gaa maka ya.
1 Ihe ekwuputala banyere EvE Echoes: ụbọchị akụkọ na ụbọchị ịhapụ
2 Nwere ike ịdebanye aha maka EVE Echoes
Ihe ekwuputala banyere EvE Echoes: ụbọchị akụkọ na ụbọchị ịhapụ
Anyị amaralarị nke ahụ ke ufọt ufọt August anyị ga-enwe ndị ikpeazụ mbipute nke EVE Echoes na nke ahụ ga-abịa na usoro nke akụkọ na awa ole na ole gara aga ụlọ ọrụ studio na-akwado mmepe ya, Netease Games, kesara.
na Netease Games na-agba ọsọ ha na-ekwu maka ụfọdụ atụmatụ na ozi ọma anyị amaghị:
Polọ ọrụ: ha ga-efu 200.000 na nha ha ga-ejikọta ikike ha. A ga-emepụta ha na ọnụọgụ nke ihe odide 50 na ihe karịrị 200 ndị egwuregwu.
EVE ikwughachi ego ọ ga-abụ ọkwa atọ:
Alfa (n'efu): ụfọdụ ọdịnaya ga-adị na ọnụọgụ nkà
Omega Basic: enwekwu nkà dị na ụlọ ọrụ agbachi. Nkezi nkà site na 5 ruo 10 kwa ọnwa
Mekpụrụ Omega- Emeghee nkà niile na ọdịnaya ndị ọzọ. Oke nkà ruru nke 15 ruo 20 kwa ọnwa
Ọsọ ọhụrụ dị: Yan Jung na otu ụgbọ mmiri nke aka ya ga-ebugharị
Ya mere, anyị enweworị atụmatụ nke ụdị freemium (ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ ya) na nke ahụ gụnyere ọkwa atọ site na nke nweere onwe anyị nke anyị ghọtara nke a kwụrụ ụgwọ. Anyị enweghị ozi ego, ma anyị chere na ọ ga-abụ usoro ndenye aha na EVE Online.
E nwere ọtụtụ ozi ndị ọzọ dị, ma ugbu a ọ na-anọgide n'ime asịrị. Mana ọ bụ kpọmkwem ihe anyị na-achọ iji mezue ụdị egwuregwu egwuregwu mkpanaka a na nke siri ike ịpụ na freemium. Ebe a EVE ikwughachi soro usoro EVE Online, ya mere, anyị ga-amata ọnụ ahịa nke ọkwa ndị bụ isi na ọkwa.
Nwere ike ịdebanye aha maka EVE Echoes
Ma ọ bụrụ na anyị nwere ụgbọala na-adọkpụ maka egwuregwu EVE Echoes, ugbu a anyị nwere ndebanye aha gara aga nọ n'ọrụ iji kwadebe maka mbido ikpeazụ ahụ site na Playlọ Ahịa Google. Na onyonyo ewepụtara ụnyaahụ anyị nwere ike ịhụ otu esi ebufe afọ abụọ ahụ nke obodo n’onwe ya nyeere aka wee kee MMO a.
N'eziokwu anyị na-akpọ beta na izu ndị ahụ anyị nwere obi ụtọ egwuregwu nke na mbụ ga-enwe nnukwu obodo n'etiti ya. Nke ahụ kwuru, anyị na-eche ihu egwuregwu intaneti nke ọ dị mkpa ịnọ na ụlọ ọrụ (ma ọ bụ gịnị ga-abụ ezinụlọ), ebe ọ bụ na obodo ndị a na-enwe ike ịchịkwa usoro mbara igwe iji wepụta ihe ndị ahụ wee weta ha n'ahịa ha n'ahịa.
EVE Online nwere a akụ na ụba na-agba ọsọ site na otu egwuregwu ọ bụkwa ihe ezubere na EVE Echoes. Nke ahụ bụ, ọ na-e theomi ezigbo akụ na ụba iji were ya gaa na mbara igwe ọzọ nke usoro mbara igwe ndị a niile na-echere anyị maka ọgụ PvP, nyocha, igwu ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ pụtaghị na ị nwere ike ịme dị ka onye pịara ohere, mana ọ ga-efu gị ọtụtụ ihe iji chebe onwe gị megide ụlọ ọrụ ndị otu narị otu narị ndị egwuregwu.
EVE Echoes na-akwado ịpụ n'etiti ọnwa Ọgọst ma site ebe a anyị ga-agwa ya ka ị ghara ịchefu nkọwa nke otu n'ime egwuregwu nke afọ. Echefula nhọpụta ahụ, wee gaa ịdenye aha ugbu a tupu ị nwee ọmarịcha ịma mma nke oge ọkọchị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » EVEes ga-ebido na August: nke a bụ ụdị ego ya na ntinye aha ya